Xildhibaanada ku midoobay dallada Horusocod oo ka hadlay wararka sheegaya in Dowladda Soomaaliya ay Kenya u gudbisay Dacwad ka dhan ah | RBC Radio
Xildhibaanada ku midoobay dallada Horusocod oo ka hadlay wararka sheegaya in Dowladda Soomaaliya ay Kenya u gudbisay Dacwad ka dhan ah
NAIROBI(RBC RADIO)Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliye ee ku bahoobay dallada Horusocd ayaa beeniyey wararka sheegaya in Dowladda Soomaaliya ay Dacwad ka dhan ah u gudbisay Dowladda Kenya.
Xildhibaan C/fataax Ismaaciil Daahir oo kamid ah Xubnaha Baarlamaanka ee ku midoobay Dallada Horusocod ayaa sheegay ineysan jirin wararka sheegaya in Dowladda Soomaaliya ay Dacwad iyaga ka dhan ah u gudbiso Dowladda Kenya.
Mudanahan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa tilmaamay in hadii ay jirto arintani ay ceeb ku tahay dowladda Soomaaliya iney Xildhibaano Qaran ku Dacweyso dal kale,Wuxuuna xusay iney ku bahoobeen sidii dalka loo samatabixin lahaa,Wuxuuna shaaca ka qaaday iney jecelyihiin iney kulamadooda ku qabsadaan gudaha dalka.
“Anaga xiriirka R/wasaaraha iyo Baarlamaanka waa mid wanaagsan.ilaa hada anaga waqti yar baan u haynaa Xukuumadda,waxaan diyaar u nahay inaan siino waqti ku filan,Wax kasta oo ay nooga baahdaane waan ku taageeraynaa”ayuu yiri Xildhibaan C/fataax Ismaaciil Daahir.
Dallada Horusocd oo ay ku mideysan yihiin in ka badan 88 Xildhibaan oo dhawaan lagaga dhawaaqay Magaalada Nairobi ayaa guux Siyaasadeed dalka ka dhalisay,Ragga horboodaya Dalladan ayaa ku hungoobay xilal ay u tartameen,Dad badan ayaa u arka in Dalladan la doonayo in lagu Manjaxaabiyo Xukuumadda R/wasaare Khayre oo la kulmaysa mucaaradad fara badan xilli ay muda kooban jirto.